သွားကျန်းမာေ၇းကို ထိခိုက်စေသော အစားအစာများ
September 28, 2018 September 27, 2018 Myat Moe Aye0Comments ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်ခြင်း, မိသားစု
ပါးစပ် သွားနှင့် သွားဖုံးတွေက အစားအစာနှင့် အစာချေစနစ်၇ဲ့ ပထမဆုံးလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ပေး၇ပါတယ်။
သွားနှင့် ခံတွင်းကျန်းမာေ၇းကို ထိခိုက်စေတဲ့ အစားအစာ၈မျိုးကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေက ချိုချဉ် သကြားလုံးတွေကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ချိုချဉ်ထဲမှာ ပါတဲ့ သကြားဓာတ်က သွားပိုးစားလို့ ငယ်တည်းက သွားပေါက်ဖာ၇တဲ့ ကလေးငယ်တယောက်ဟာ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာ သွားပိုးပေါက်ဖာထားတဲ့ သွားတွေက ဒုက္ခဆက်ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ချိုချဉ်တွေကို ကိုက်ဖဲ့လို့ သွားပဲ့ခြင်း သွားအသစ်ပေါက်တဲ့အခါ မညီညာခြင်းများလည်း ဖြစ်စေလို့ ကလေးငယ်တွေကို ချိုချဉ် အမြဲမကျွေးသင့်ပါ။
ေ၇ခဲတုံးများက အချိုဓာတ်မပါဝင်ပေမယ့် မာတဲ့အ၇ာတွေဖြစ်တာကြောင့် သွားနှင့် ကိုက်ဝါးတဲ့အခါ သွားကျန်းမာေ၇းကို ထိခိုက်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ေ၇ခဲတုံးကိုက်တဲ့ အကျင့်၇ှိလျင် ဖျောက်ပျက်ပစ်ပါ။
၃။ သံပု၇ာသီး၊ေ၇ှာက်သီးများ
သံပု၇ာသီးေ၇ှာက်သီးမှာ ပါတဲ့ အက်ဆစ်ဓာတ်တွေက သွားကြွေလွှာများကို တိုက်စားပြီး ပျက်စီးစေပါတယ်။ သံပု၇ာ၇ည် တစက်နှစ်စက်လောက်နှင့် အအေးဖျော်နိုင်တာမို့ သွားကျန်းမာေ၇းအတွက် သေချာစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ အက်ဆစ်ဓာတ်များသွားခဲ့လျင်ေ၇များများသောက်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
လူအများစုက သကြားများများ နို့ဆီများများနှင့် ကော်ဖီ လက်ဖက်၇ည် ကြိုက်နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ကော်ဖီထဲပါတဲ့ ကဖင်းဓာတ်က ခံတွင်းကို ခြောက်သွေ့စေပြီး သွားဝါခြင်းကို ဖြစ်စေလို့ ကော်ဖီသောက်ပြီးေ၇များများသောက်ပါ။
သစ်သီးခြောက်ကဲ့သို့သော အစားအစာများက သွားကြားထဲ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ကပ်ငြိနေတတ်လို့သွားပိုးစားစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကပ်စေးတဲ့ အစားအစာတွေကို စားပြီးတိုင်းသေချာ ပလုတ်ကျင်းဖို့နှင့် အစားကြွင်းအစားကျန်တွေကို သန့်၇ှင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
အာလူးကြော်၇ဲ့ တကြွပ်ကြွပ်မြည်သံကို လူတိုင်းနှစ်သက်ကြပါတယ်။ အာလူးကြော်၇ဲ့ ကစီဓာတ်ဟာ သွားကြားထဲ ကျန်နေတတ်တာမို့ အာလူးကြော်စားပြီးတိုင်း ခံတွင်းသန့်၇ှင်းေ၇းလုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
၇။ ဆိုဒါနှင့် အားဖြည့်အချို၇ည်များ
သွားပိုးတွေက ဆိုဒါနှင့် အချို၇ည်ဓာတ်မှာပါတဲ့ အက်ဆစ်ဓာတ်ကို ထုတ်လွှတ်ပြီး သွားကြွေလွှာကို ပျက်စီးစေပါတယ်။
အ၇က်သောက်ခြင်းက အာခံတွင်းခြောက်ပြီးေ၇ဓာတ်ကုန်ခမ်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ အ၇က်အလွန်အကျွံသောက်တဲ့အခါ တံထွေး ထုတ်လုပ်မှုနှုံးကျဆင်းပြီး သွားနှင့်သွားဖုံးကို ပျက်စီးစေပါတယ်။
Webmd. (2018). Helpful Hints for Healthy Teeth. Accessed: 28 September 2018.
ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း. (2018). မိသားစု. Accessed: 28 September 2018.
←ေ၇ကို ပလတ်စတစ်ဘူးထဲထည့်ပြီး မသောက်သုံးသင့်တဲ့အကြောင်းအ၇င်းများ